Izihluthulelo Ezintathu Zokusebenzisa Okuqukethwe Kwakho | Martech Zone
Izikhiye Ezintathu Zokusebenzisa Okuqukethwe Kwakho
NgoLwesithathu, Februwari 25, 2009 ISonto, May 29, 2016 Douglas Karr
Abathengisi abaningi basebenzisa ucezu olulodwa lobuchwepheshe abalijabulelayo noma abenethezekile ngalo futhi bangazinaki ezinye. Ngingumsekeli omkhulu we-automation futhi umakethi usebenzisa imilayezo yakhe nganoma iyiphi indlela, ukwakheka, noma ifomu - ngendlela yokuthi ayikaze ilimaze imizamo yabo yokumaketha.
Ngokuphathelene nokuqukethwe kwenkampani ngokusebenzisa isayithi yayo, izindatshana, amaphepha amhlophe, ama-case studies noma i-blog yayo yenkampani, ngikholwa ukuthi kunezinkinobho ezintathu zokwenza okuqukethwe kwakho kusebenzele inkampani noma umkhiqizo wakho ngempela:
Hlala Ufanele - hlala uqonde futhi, noma ngabe ulingeka kangakanani, zama ukuqinisekisa ukuthi uhlala ukhuluma namakhasimende akho noma amathemba akho. Lokhu kuzokutholela igunya nedumela eliqinile ngokushesha okukhulu kunokuthi uma weqa uzungeze noma wehluka kumyalezo wakho.
Shicilela Njalo - kunamathemba namakhasimende laphaya afuna okuqukethwe kwakho, kepha angazi ukuthi kukhona. Thumela izindatshana kwamanye amasevisi, ukukhishwa kwabezindaba, beka izixhumanisi kumikhombandlela, engeza ezingxoxweni ezinkundleni ezifanele, khuthaza ama-athikili akho ngamathuluzi okubekisa omphakathi, uthumele kumasayithi ezindaba, ama-wikis, njll. Yiba yi-blogger yezivakashi futhi uphawule ngamanye amabhulogi anezixhumanisi emuva kokuqukethwe kwakho. Faka izixhumanisi kuma-invoice akho, amasiginesha wakho we-imeyili, amakhadi akho ebhizinisi… yonke indawo!
Syndicate Yonke indawo - Cishe lonke uhlelo lokusebenza lwezokuxhumana lunezici zokushicilela okuphakelayo kwakho kwe-RSS kusevisi yabo. Sebenzisa konke okukodwa! Abantu abaningi basebenzisa inethiwekhi eyodwa futhi abaze baphambuke, qinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kulapho bafuna ukukuthola khona! Shicilela ku-Twitter, Futhi!
Ufake umsebenzi onzima futhi wabhala okuningi okuqukethwe okufanele. Manje sebenzela ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kuthola ukunakwa okukufanele!
Tags: ukuhlanganiswa kokuqukethweshicilelashicilela okuqukethweukuhambisanaokuqukethwe okufaneleuhlale efaneleukuhlanganisa
Ungayisika Kanjani I-Blog Yakho Traffic Engxenyeni
Ividiyo: Ungayishicilela kanjani iBlog yakho ku-Twitter
Izeluleko ezinhle kakhulu.
Inhlamvu yakho ephezulu: Ukuhlobana kubalulekile
Enye yezinto nayo eyisihluthulelo ukubeka phansi isu. Njengesibonelo isu lethu ngelithi:
- Zibandakanye nabakhangisi bezokuxhumana abaxoxa ngamasu, ukuma, ukubaluleka nethonya
- funda konke okushicilelwe ngabaphehli abaphambili (Brogan, Owyang…)
- zibandakanya maphakathi nomlingo (abantu abanethonya elikhulu futhi abanolwazi kakhulu esihlokweni).
Ngichaze inqubo yethu ngemininingwane eminingi lapha: http://blog.ecairn.com/2009/02/18/fighting-social-media-fear/
Noma iyiphi impendulo yamukelwa ngokufudumele.